श्रीमानले रक्सी पिएर यौनसम्पर्क गर्नुहुन्छ, यस्तो व्यवहारले भविष्यमा नकारात्मक असर पर्दैन? – Rastriyapatrika
श्रीमानले रक्सी पिएर यौनसम्पर्क गर्नुहुन्छ, यस्तो व्यवहारले भविष्यमा नकारात्मक असर पर्दैन?
म ३३ वर्षकी भएँ । मेरो विवाह भएको ६ वर्ष भयो । मेरा श्रीमान् ३९ वर्षको हुनुहुन्छ । हाम्रो मागी विवाह भएको थियो । उहाँ सुरुदेखि नै यौनसम्बन्ध राख्नुअघि बियर वा रक्सी पिउन रुचाउनुहुन्छ । वियर वा रक्सी नपिई यौनेच्छा नै नहुने उहाँ बताउँनुहुन्छ । हिजोआज मलाई पनि ती कुरा पिउन कर गर्नुहुन्छ । बिस्तारै उहाँको यस्तो व्यवहार बढ्दै गएको छ । उहाँको यस्तो व्यवहारले मलाई दिक्क तुल्याउन थालेको छ । मलाई यस्तो व्यवहारले भविष्यमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ । के मेरो डर साँचो हो ?
कतिपय मानिस बियर वा रक्सी पिएपछि आफू नजिकको व्यक्तिलाई आकर्षक देख्छन् । उनीहरू रक्सी पिएको व्यक्तिलाई पनि आकर्षक देख्न थाल्छन् । जो आफू आकर्षक नभएको महसुस गर्छन् उनीहरूले बियर वा रक्सी पिएपछि आकर्षक भएको महसुस गरेपछि त्यसको असरस्वरूप यौनसम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने मान्छन् । एक अनुसन्धानमा बियर वा रक्सी पिउन दिएपछि पुरुषलाई महिलाको तस्बिर तथा महिलालाई पुरुषको तस्बिर हेर्न लगाई उनीहरूको प्रतिक्रिया लिइएको थियो । बियर वा रक्सी पिएको तथा नपिएको अवस्थामा एउटै तस्बिर हेर्दा व्यक्त हुने प्रतिक्रियाका आधारमा नतिजा निकालिएको यो अध्ययनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बियर गुगल भनिन्छ ।